नेपाल आज | छोरी मार्न वावु आमाले नै दिए ‘सुपाडी’, १ लाखमा अमृताको हत्या !
छोरी मार्न वावु आमाले नै दिए ‘सुपाडी’, १ लाखमा अमृताको हत्या !
रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका ७ लौकाहाकी १७ वर्षीया अमृता कुमारी साहको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा उनकै वावुआमासहित ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्ने मृतकका वावु माधवनारायण नगरपालिका ७ लौकाहाका ५५ वर्षिय रामअयोध्या साह तेली, आमा सीतादेवी साह, देवाही गोनाही नगरपालिका २ लक्ष्मीनिया कुरुनीयाका ६० वर्षीय शेख अलियास, ४० वर्षीय बहुदल भन्ने इस्लाम अंसारी, ३६ वर्षीय शेख इम्प्ताज, परोहा नगरपालिका ४ का ४६ वर्षीय छोटेलाल साह र देवाही गोनाही नगरपालिका –२ लक्ष्मीनिया कुरुनीयाका कैमलु देवान छन् ।
अनुसन्धानका क्रममा अमृताको हत्याका लागि उनकै वावुआमाले किलरलाई सुपारी दिएको खुलेकाले पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । माइतीघरमा आमासँग सुतिरहेको अवस्थामा आमा चर्पी गएको मौका छोपी करिव ५ जनाको समूहमा आएका अपरिचित व्यक्तिहरूले २६ कात्तिकमा अमृताको गोली हानी हत्या गरेका थिए ।
प्रहरीका अनुसार अमृता विगत तीन वर्षदेखि स्थानीय एक युवकसँग प्रम सम्वन्धमा थिईन । तर, परिवारको दबावमा ०७६ फागुनमा सर्लाही विष्णु गाउँपालिका ३ का एक युवकसँग उनको विवाह भयो। उनका पतिमाथि छुरा प्रहार गरेर ज्यान मार्ने प्रयास भएपछि अमृता माइतमा वसेकी थिईन । पपतिको ज्यान मार्ने षडयन्त्र गरेको आरोपमा अमृता र उनका प्रेमी उपर ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
पतिपत्नि विच सम्वन्ध विग्रिएको र अमृता माईतमै वस्न थालेपछि उनीहरुको ०७७ साल असारमा सम्बन्ध विच्छेद समेत भएको पाईएको छ ।
अमृताको प्रेम सम्वन्ध वावु आमालाई मन नपरेको र त्यसमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा समेत दर्ता भएपछि समाजमा इज्जत जाने डरले रामअयोध्याले नै उनको हत्या गर्ने योजना वनाएका थिए । उपचारका लागि भन्दै अमृतालाई भारतमा लगेर हत्या गर्ने योजना वनेको थियो । तर, त्यो योजना असफल भएपछि अभियुक्त कैमलु देवानलाई १ लाख रुपैयाँ दिएर हत्या गर्ने जिम्मा दिईएको पाईएको छ ।
उनीहरूविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतबाट ज्यान सम्बन्धी कसूरमा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रदेश २ प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी कृष्ण प्रसाईले जानकारी दिएका छन् ।